आज, धेरै महिला तिनीहरू पनि पूर्ण हुन् भनेर गुनासो। आफ्नो downright depressing को विचार! तिनीहरूले हरेक अतिरिक्त किलोग्राम हुन् भनेर घृणित हो, र तिनीहरूलाई थाहा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ गर्ने मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गरेन लाग्छ। वास्तवमा, सबै को पूर्णतामा कुनै दोष, र यो बोसो महिला जस्तै धेरै मानिसहरू छ।
अर्को प्रश्न स्टाइलिश र फैशन लुगा ठूलो आकार एकदम गाह्रो किन्न के छ। आज, सुन्दर लुगा ठूलो सुरुचिपूर्ण आकार भएका सबै महिलाहरु को लागि पर्याप्त हुनेछ जो, को मात्रा मा तिनीहरूले गरे हुनत आकार, तर छैन।
तर,, स्टाइलिश आधुनिक र आरामदायक वस्त्र आफ्नो दराज माथि भर्न धेरै तरिकाहरू छन्। तिनीहरूले कलम, लगनशीलता र सिप बनाउन, भन्न रूपमा मात्र आवश्यक छ। र अझै, को पाठ्यक्रम, धैर्य!
उदाहरणका लागि, ठूलो महिलाहरु को लागि हात बुनाई छैन केवल महिलाहरु को शैली विविधता मदत गर्नेछ, तर पनि सुन्दर यसको विशिष्टताको र आकर्षण accentuate। केही trendsetter पूर्ण महिला लुगा मुक्त लगाउन आवश्यक छ कि एक यस्तो धारणा व्यक्त पछिल्लो शताब्दीमा मानिन्छ पूर्णतामा लुकाउँछ। र त्यो प्रवृत्ति गए - लागि धोक्रे ओढ्ने बनाउन "पूर्णतामा लुकाउने!"
र पूर्ण लागि सबै आवाज hayali बुनाई लागि रूपमा! यसमा सबै कडाई Taboo बुझाइएको थियो। यसलाई स्वाद नभएको र कुरूप छ - तिनीहरूले रसीला निट मा एक महिला भन्छन्। आज, सबै भन्दा डिजाइनर विश्वास गर्न इच्छुक छन् जर्सी को कोमलता, यसको सजिलो फिट अत्यन्तै आकर्षक कुनै पनि आंकडा मा नजर छ। यसलाई सही मोडेल चयन गर्न र सही यसलाई प्रदर्शन मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
विशेष गरी रमणीय charmer कोमल, प्रकाश openwork गरे उत्पादनहरूमा rubenovskimi प्रकारका साथ देखिन्छ। कफ संग मोडेल - मोटे महिला लागि प्यारा pyshechki बुनाई crochet एक फैशन openwork cardigan वा शाल मालिक हुनेछ, tassels वा मूल poluponcho संग poncho। यी लुगा चलाउन पनि शुरुआती craftswomen लागि सजिलो छ।
openwork मुद्रा प्रदर्शन गर्न तपाईंले पहिले छवि रोज्नुपर्छ। एक साधारण को - को "त्रिकोण।" यो आंकडा प्रयोग मोटे महिलाहरु को लागि बुनाई नेत्रहीन यो आँखा दृश्य ढाँचा छ distracts रूपमा, बरु यसको आकार बढ्ने छैन, तर।
प्रदर्शन गरिएको छ, यो एकदमै सरल छ: एक स्तम्भ दुई SC संग sc वा स्तम्भ तीन स्तम्भहरू बुना छ। त्यसपछि, अर्को त्रिकोण अघिल्लो पङ्क्ति दुई स्तम्भहरू neprovyazannymi पारित भएपछि र तीन स्तम्भहरू vyvyazyvayut फेरि तेस्रो गरिन्छ।
अझ "उन्नत" मोडेल needlewomen अलग भागहरु को निर्वाचकगण प्रस्ताव लागि। माछा,: यो रंग वा विवरण Nautical विषय को एक किसिम हुन सक्छ गोले, समुद्र तारा र octopuses। त्यसपछि तिनीहरूले तरिकाले नमुना भन्दा वितरण र हावा चेन को माध्यम द्वारा एक हुक एकल उत्पादनमा सामेल छन्।
तयार बनाएको सानो भागहरु को विधानसभा - मोटे महिलाहरु को लागि बुनाई फैशनेबल महिलाहरु टाँसन र ponchos, एउटै विधि द्वारा प्रदान गर्दछ। विशेष गरी ठूलो पहेंलो फूल संलग्न हावा श्रृंखला कालो ठोस वर्गहरूको संग कंपित को दिन लायक उत्पादन देखिन्छ। ब्रश वा सानो झुन्डिएका tassels उत्पादन किनारा सजाउनु।
Cardigans र कोट - यो छुट्टै लेखमा छ। यी कुरामा मोटे महिलाहरु को लागि बुनाई एक तंग बाध्यकारी, सामान्यतया SC बिना स्तम्भ आवश्यक छ। तपाईं उत्पादन एक रंग आभूषण संग एक विस्तृत पट्टी छ सजाउनु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले सजिलै यो प्रदर्शन गर्न सक्छन्। Cardigan गर्न भविष्यमा मालिक जस्तै सबै भन्दा छ कि एक ढाँचा चयन गर्नुहोस्।
तपाईं यो आंकडा चाहनुभएको रूपमा बुनाई गर्दा jacquard crochet ढाँचा धेरै रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। योजना यो स्तम्भ फरक रंग मा बुनना गर्न आवश्यक छ भनेर देखाउँछ, यो अर्को मुख्य मुद्दा बाँधिएको हुनुपर्छ। अब, मुख्य मुद्दा लेखको माथिल्लो किनारा साथ प्रवाह छ, एक फरक रंग मा फिट स्तम्भ हुक, र यसरी ताना यार्न भित्र देखिन्छ। यसलाई साथै भित्रबाट अगाडिबाट जस्तै देखिन्छ कि पक्षीय आभूषण गर्दछ।
पछि, बैंड vyvyazannym ढाँचा मदत उहाँलाई वस्त्र वर्तमान उत्पादन बनाउन, कुनै पनि सबै भन्दा सरल outfit संग सजाया गर्न सकिन्छ।
बुनाई सुई गर्मी ब्लाउज विवरण (फोटो)
आफ्नो हातले केटाहरू तिनजनासशस्त्रसिपाही लागि कार्निभल पोशाक कसरी बनाउने?
Craquelure - यो ... craquelure डिकोउपेज मा: एक मास्टर वर्ग। एक-चरण craquelure
क्यालिफोर्निया मा 2014 मा खडेरी
राष्ट्रिय स्वीडिश मुद्रा
ताप FREH: समीक्षा। ताप सिस्टम PLEN
Tonka-मिसिन-गनर: तस्बिर संग जीवनी
वास्तुकला को गोथिक शैली